Ikamelo lokulala elikhulu elivalekile elinekamelo lokulala elingu- w/ubhavu wangasese - I-Airbnb
Ikamelo lokulala elikhulu elivalekile elinekamelo lokulala elingu- w/ubhavu wangasese
Shenyang, Liaoning, i-China
Ikamelo e-ifulethi ibungazwe ngu-Na
U-Na Ungumbungazi ovelele
Lena yindlu enkulu enamakamelo okulala amathathu angu-150 sqm. Ubhukhe ikamelo lokulala elikhulu elinendlu yokugezela yangasese, ikamelo lokulala linokhiye, futhi ikamelo lokuphumula linomabonakude we-inthanethi wama-intshi angu-55.
Indawo enkulu evamile, igumbi elikhulu lokuphumula, igumbi elikhulu lokudlela, ikhishi elikhulu.
Izinto zombhede zisanda kulungiselelwa, ama-slippers amasha anikezwa/isivakashi ngasinye.
Izinto zasekhishini, izitsha zetafula zihlinzekwa ukuze zibonise amakhono akho okupheka.
Asikho isihlalo sokubhucunga umzimba okumangazayo
Ngiye ngavakashela amazwe angaphezu kwamakhulu amabili ngedwa, kusukela e-United States kuya e-Russia, kusukela e-Iran kuya e-Indonesia, ngakhuphuka izicongo eziphakeme kunazo zonke eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, ngakhuphuka izintaba-mlilo ezisebenzayo, ngahlola ehlathini, ngigijime esibhakabhakeni, futhi ngidansa ebusuku.
Endleleni, ngithole usizo oluningi kubantu ongabazi, ngiye ngahlala ezindaweni ezihlukahlukene, nakuba ngivame ukuba matasa emsebenzini, ngisafuna ukukusiza phakathi nohambo lwakho!Nakuba indawo yami ingeyona indawo enhle kakhulu, inomuzwa wokuthi isekhaya; nakuba indawo yami ingekho esiteshini, eduze komgwaqo ohamba ngezinyawo, kodwa ezokuthutha kulula; nakuba indawo yami ingekho ehhovisi, kunezinhlobo zonke zezindawo zokudlela nezitolo ezinkulu eziseduze, ukuphila kulula; nakuba indawo yami ingekho ezintabeni ezijulile namahlathi aminyene, endaweni engumakhelwane esezingeni eliphezulu, indawo eluhlaza ihle kakhulu, ithule futhi iphephile. Woza futhi ukujabulele!
､ ､ ､,,,!
UNa Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Shenyang namaphethelo